Njengoba akumangalisi, uhlobo lwe-epistolary lukhona nanamuhla. Futhi ngendleleni, ikhula, ibucebe, ibonakale futhi iyasimangaza ngezici ezintsha namasiko. Futhi umzuzwana okwembulwa kakhulu kulezi ziqondiso ukuxhumana nge-e-mail noma, njengoba kuthiwa kungenjalo, i-imeyili.
I-imeyili ibhekwa njengendlela uhlelo abantu abangakwazi ukushintshanisa ngayo imiyalezo nolwazi oluthile nabantu abanokufinyelela kwi-Inthanethi emhlabeni jikelele. Isimiso esijwayelekile salesi siphequluli se-intanethi sinokufana nomsebenzi wemeyili evamile. Ubhala incwadi, ucacise ikheli, futhi uthole i-interlocutor yakho ebonakalayo. Iqiniso liwukuthi konke okwenzekayo kumzuzwana wemizuzwana. Futhi ungathola impendulo encwadini yakho. Ngakho konke ukukhulumisana nge-e-mail kule ndlela.
Ngendlela, wonke amakheli e-imeyili anesici esisodwa sici. Okokuqala, lokhu kungukuba khona kwesithonjana se- "@", esibizwa ngokuthi "doggie" nge-e-mail. Nje le "doggie" futhi ihlukanisa izingxenye ezimbili ezibaluleke kakhulu ikheli le-imeyili - igama lomsebenzisi webhokisi le-imeyili negama le-imeyli yeposi lapho ibhokisi lemeyili libhaliswe khona.
Ukuze uqale i-imeyili yakho, udinga nje ukuthola injini yokusesha noma iyiphi iseva yeposi oyithandayo futhi ubhalise kuso. Le nqubo ilula futhi, okubaluleke kakhulu, mahhala. Udinga ukukhetha igama nephasiwedi yebhokisi lakho lemeyili. Ngosizo lwephasiwedi, ungafinyelela kuwo futhi uhambisane nokuxhumana kwakho ngenethiwekhi. Kumele ugcine le iphasiwedi imfihlo kubangani, ngoba kubonga ukuthi ungakuvikela ibhokisi lakho leposi kwabanye, futhi ukukhulumisana kwakho kuzohlala kuyimfihlo. Ukukhetha igama lebhokisi lakho lemeyili ku-intanethi, okokuqala ucabange ukuthi yiziphi izinjongo okudingayo. Uma ufuna ukuzithokozisa ngenhloso yokuzijabulisa, ukuxhumana ngokusebenzisa i-imeyili ye-mail yangempela ngonyaka ofanayo kusuka kwamanye amadolobha noma emazweni, khona-ke ungathola igama elihle futhi elingavamile. Futhi uma kwenzeka uzoxhumana ngeposi, isibonelo ngothisha, kungcono ukubiza igama lakho leposi noma isibongo, noma, ekugcineni, ukuze uthole igama elibi elibizayo. Uma kwenzeka ukuthi ukukhulumisana kwakho ngeposi kusho kokubili amacala angenhla, bese uphatha amabhokisi amabili eposi.
Futhi kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukuxhumana nge-e-mail kunezidingo zayo kanye nemithetho yokuziphatha. Manje ake sicabangele okuyinhloko yalezi zingoma zokuxhumana nge-elektroniki. Ungalokothi ukhohlwe ukunikeza igama ema-e-mail akho. Qaphela ukuthi eduze komugqa "I-Addressee" iyinhlangano ehlukile ebizwa ngokuthi "Isihloko". Kulo mgca ukuthi kunconywa, ngamazwi ambalwa, ukuthi uchaze okuyinhloko yomlayezo. Isibonelo, ngokubhekisela kumngani noma kumngani ophakamise ukuhamba, bhala: "Isiphakamiso sokuhamba." Zama njalo ukugwema amagama angacacile nesiphukuphuku. Akunconywa, isibonelo, ukukhipha igama le-addressee kule ndaba, usuyazi ukuthi igama lakhe lingubani nokuthi le ncwadi ibhekiswe kuye.
Zama njalo ukuqinisekisa ukuthi ubukhulu kanye nokuma kwencwadi yakho kubhekene nenhloso yalo. Uma ubuzwa ukuthi uvele unikele impendulo yombuzo othize, mnike impendulo ngaphandle kokungadingekile ukuhamba nxazonke ehlathini. Zama njalo ukuhlala usondelene kakhulu nesihloko esingxoxwa ngaso. Uma unesifiso sokuxoxa okuthile okuhlukile, kuhle ukukwenza encwadini entsha.
Ungalokothi uhambisane nokuxhumana, unesicindezelo esinamandla ngokomzwelo. Ngoba ngenxa yalokho ungazisola ngempela lokho okubhalile, ukuthonywa imizwelo yakho. Khumbula, akunakwenzeka ngokuphelele ukususa i-imeyili oyithumele. Futhi, ngaphambi kokuba ubhale noma yini, cabanga ngokucophelela ukuthi udinga ukuxhumana nemininingwane yomuntu siqu futhi obuseduze e-mail. Yazi ukuthi ukuxhumana kukuphi - lokhu akuwona uphawu lokuvuleka ngokweqile nokukhululeka.
Ukuphendula izinhlamvu ezitholiwe, zama ukuzijwayela ngokugcwele futhi ngokuningiliziwe ngokuhlola okuningiliziwe okubukeziwe. Khumbula ukuthi ngamabhokisi okuthumela nge-elekthronikhi ngezinye izikhathi athumela izikhangiso noma imilayezo yogaxekile, okumele isuswe nge-"spam".
Ngendlela, uma incwadi yakho iqondiswa uthisha noma ikhalenda osebenza naye ngokwesayensi ndawonye, ​​ungakhohlwa ngemininingwane ebalulekile njengesiginesha sakho. Yiqiniso, asisho isignesha esifaka emadokhumenti. Lapha sikhuluma ngomusho omfushane, ophethe inothi elihle. Isibonelo, "Okungokwenu ngokwethembeka nangokwethembeka kakhulu. USvetlana. "
Futhi, ungalokothi uhlale phambi kweqapha, futhi, ngokuvuselela ukuvuselela ikhasi le-elekthronikhi, ungalindeli impendulo esheshayo encwadini yakho. Ungalokothi ukhubeke, uma kukulinda isikhathi eside - kuhle. Into esemqoka ukuqinisekisa ukuthi uphendula ngokushesha futhi ngokushesha kubangani bakho.
Futhi ekugcineni ngifuna ukungeza, naphezu kokuthi i-imeyli yenzelwe ukuxhumana okusheshayo kolwazi, akusiyo imizwelo yabantu ejwayelekile. Ukuze udlulisele le mizwelo, kukhona okuthiwa "smileys" - izimpawu ezifana nesimo sobuso bomuntu obuhlukile ngesikhathi sesimo sakhe esithile sengokomzwelo. Kunezinhlobo eziningi ze "smileys" ezinjalo, ezihlukaniswe ngamaqembu ahlukene. Ezinye zazo zisetshenziswa kakhulu, ezinye, ngokuphambene nalokho, zivame kakhulu. Ekugcineni, ungathola izimpawu ezinjalo zomzwelo ngokwakho, ngenxa yalokhu nje udinga ukubeka ingxenye encane yemizwelo yakho kulo mlayezo we-Inthanethi.
Yiyo indlela imithetho eyisisekelo yokuxhumana nge-e-mail ibheka. Ngendlela, le mithetho ayifanele kuphela ama-imeyili. Zingafakwa ngokuphepha ngesikhathi sokuxhumana nabantu (VKontakte, Classmates noma Facebook) ngisho nakwamanye amakamelo okuxoxa. Ngakho-ke, zibeke ngokufanele ukuhambisana naloluhlaka lokuxhumana nge-elekthronikhi, futhi ngokushesha uqaphele ukuthi abantu bathanda ukuxhumana kanjani nawe. Khumbula ukuthi ukuxhumana nge-inthanethi, okokuqala, kuyindlela yokuxhumana nabantu abaphilayo. Ngakho-ke, bazise futhi bahloniphe abaxhumana nabo.
Uyini umehluko phakathi kokudlala ngothando nokudla?
Senza izinto ezihlukahlukene ekuziphatheni ngokocansi nge-massage ethandwayo
Ukuphola kwangempela kwezikhangiso zephephandaba
Indlela yokudukisa umuntu ngezwi
Yini okufanele ibe yindoda emndenini
Abanikazi bomlenze obuhle kakhulu eHollywood
Aubergine pâté ngegalikhi
Ikhekhe le-Easter likagogo
Isitshalo seqanda ngo-tomato
Ukwelashwa kwe-acne namafutha abalulekile
I-Lenten izambatho zamazambane
Izitayela zebhizinisi zezinwele ezinde
I-Curd inhliziyo namajikijolo
Indlela yokunakekela kahle iziphuphu zomhlaba
Isinkwa esakhiweni sezinkwa
IGrisi: ukuvakasha, amaholidi olwandle